Rita, Writing for My Sake!: အဖြူရောင်များ ... သို့မဟုတ် အချစ်အကြောင်း အက်ဆေး (၁)
Posted by Rita at 12/13/2009 01:56:00 AM
အဖြူရောင် ဒဿနတွေ ကောင်းလှချည်လား။ အစ်မလည်း အဖြူရောင်ကြိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ Yita ရေးထားတဲ့ ဒဿနတွေကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး။ လူက အသားညိုတော့ အဖြူရောင်ဝတ်တော့ ပိုပေါ်တယ်လေ အဲဒါကြောင့် ကြိုက်တယ်ထင်တယ် အဟိ..။ ဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ရပ်တည်ချက် တိတိကျကျ မရှိလို့ ကြိုက်လို့ ကြိုက်တယ်လို့ပဲ ပြောရလိမ့်မယ်။
Original color before dye..
Very sensitive to any others.
I lost my own white during the struggle life.
You can find my status icon.
You can dye me by using the base color blue,red and yellow as your desire.
ဒါပေမယ့် ဖတ်ရင်းနဲ့ တေဇာရဲ့ အစိမ်းရောင်ဆိုတဲ့ အက်ဆေး ကိုသတိရမိတယ်
ပြီးတော့ စာကြောင်းတွေကြားထဲက အီးတွေနဲ့ မြားတွေက အာရုံနောက်တယ်
အဖြူရောင် ကြိုက်လို့ အဖြူရောင် ဒဿနတွေ လာဖတ်ပါတယ်..
အင်း အရင်ကတော့ အဖြူရောင်ကြိုက်သေး ငယ်လည်းငယ်သေးကိုး ... ခုတော့ အရောင်စုံသွားပြီ
ပြန်ဖြူချင်လို့လည်းမရတော့ဘူး .. အဖြူဆိုတာ အလွမ်းတွေထဲ ကျန်ခဲ့ပါပြီလေ ... အသက်တအားကြီးသွားရင်တော့ တဖန်ပြန်ဖြူသွားဦးမလားမသိ ..?
အဲ့တုန်းက ဘာပြောခဲ့လဲ မမှတ်မိတော့ဘူး.. ဒါမယ့် ခုထိ အဖြူရောင်မကြိုက်သေးဘူးဗျ..
(ပြီးတော့ စာကြောင်းတွေကြားထဲက အီးတွေနဲ့ မြားတွေက အာရုံနောက်တယ်)
ဆိုတာ အစက နားမလည်ဘူး။ ရုံးရောက်မှ နားလည်တယ်။ ရုံးက ကွန်ပျူတာမှာ အဲဒါတွေ ပေါ်တယ်။ အိမ်မှာတုန်းက ဘာမှ မမြင်ရဘူး။